Inona no teknolojia ampiasain'ny mpivarotra C-Level? | Martech Zone
Talata, Martsa 22, 2016 Douglas Karr
Black Ink nanao a Fianarana Marketing Marketing C-level 2016, manadihady ireo mpivarotra amin'ny orinasa 2000 lehibe indrindra any Etazonia amin'ny alàlan'ny fidiram-bola isan-taona miaraka amin'ny teti-bola iraisan'ny marketing mitentina 5 miliara dolara amin'ny asa sy ny vidiny.
Sintomy ny Black Ink's C-level 2016 Marketing Survey
Fianarana lehibe avy amin'ny fandalinan'ny Black Ink
Ny laharam-pahamehan'ny mpivarotra dia ny fampiroboroboana bebe kokoa ny fifandraisan'ny marika sy ny ivon'ny mpanjifa izay mitaky fanatsarana lehibe ho an'ny fotodrafitrasa Teknolojia Marketing sy ny fahaizan'ny omni-Channel.
Access to Advanced Analytics handray fanapahan-kevitra hendry kokoa»No sakana lehibe indrindra hahatratrarana fahombiazana manerana ny solaitrabe.
Ny fananganana fifandraisana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena / departemanta dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny ho avy, na dia tsy raharahiany ho laharam-pahamehana amin'ny 2016 aza izany.
Amin'ny ankapobeny, ny mpivarotra dia aleony manambola be loatra amin'ny fitazonana ny mpanjifa sy ny ezaka fisondrotana fa tsy ny fahazoana mpanjifa.
Matoky ny mpivarotra amin'ny tatitra momba ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra taktika saingy mitolona amin'ny fanomezana ny vola takiana amin'ny fanomezana ara-bola ny marketing amin'ny C-suite sy ny fitantanana ambony.
Ireo sokajy Martech 3 voalohany be mpividy indrindra amin'ny 2016 dia Business Intelligence, Marketing Automation, ary Fifandraisan'ny mpanjifa vahaolana rindrambaiko.
Mahavariana ahy fa tonga saina ireo mpivarotra fa ny lafiny rehetra amin'ny zavatra iainan'ny mpanjifa dia misy fiantraikany amin'ny fitazonana azy ireo, saingy tsy miasa izy ireo hampifandray ny elanelana amin'ny departemanta hafa. Tsy azoko antoka ny fomba hanatsaranao ny ezaka ataonao sy fitazonana azy ireo raha tsy miara-miasa akaiky amin'ireo varotra, vokatra, serivisy ary sampana fitantanana ianao amin'ny andro iray izay ampahibemaso ny lazanao sy azon'ny rehetra jerena amin'ny Internet. ny sakana amin'ny fahombiazana amin'ny fitaovana, loharano ary ny fitarihana dia amin'ny antsipiriany amin'ny valiny… fa ahoana no hanatsaranao ireo izay tsy ampitao ny marika sy hiantohana ny fahombiazany amin'ny deparments?
Amin'ny fomba fijerin'ny fitaovana, ny Teknolojia Marketing dia fanangonana vahaolana tapaka an'arivony. Ireo mpilalao lehibe toa ny Salesforce, Microsoft, Oracle, SAP, ary Adobe dia manohy mividy sehatra kely kokoa izay manitsy ny olan'ny niche - saingy tsy misy isalasalana fa indostria sarotra io miaraka amina fitaovana an-taonina sy mifanindry. Mahatsapa aho fa tsy dia be loatra ny mifampitohy amin'ny stacks marketing eo amin'ireo orinasa ireo ivelan'ireo mpilalao lehibe ireo.
Ny Black Ink ROI's C-level 2016 Marketing Study dia manasongadina ny sasany amin'ireo fironana ara-barotra amin'ny ankapobeny manerantany ireo orinasa manerantany ireo, fa misy ihany koa ireo nuansa tsy manam-paharoa eo amin'ny kolontsain'ny orinasa, ny safidin'ny tetibola, ny fanamby ary ny fotoana mety.
Miara-miasa amin'ny orinasa lehibe sasany izahay ary koa fanombohana kely ary tsy azoko antoka fa samy hafa be ny fomba fijery eo amin'izy ireo. Ankoatra ny teti-bola sy ny enti-manana, ny orinasa kely sy salantsalany dia mbola mitady tatitra tsara kokoa, mandeha ho azy mba hampitomboana ny loharanom-pahalalana ary programa hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa. Farafaharatsiny mba itovizantsika rehetra izany!
Momba ny Black Ink ROI
Black Ink ROI dia sehatra an-tserasera an-tsokosoko an-tsokosoko ho an'ny varotra, marketing ary mpitarika P&L hanatsarana ny fahazoana mpanjifa, hitazona ary hanatsara ny fahafaha-mitombo.
Tags: AdobeAnalyticsroi mainty roififandraisan'ny marikaraharaham-barotra ny faharanitan-tsainafifandraisan'ny mpanjifampanjifa-centricityautomation marketingteknolojia marketingMicrosoftÔmnia-fantsonaOraclesalesforce
Ny fiantraikan'ny fandehanana manerantany amin'ny fampiharana findainao